Atụmatụ kachasị mma maka ilekọta ma kụọ oghere n'ime ogige - Ugbo - 2020
Nzuzo nke akuku na ileghari anya
Tunbergia abatakwa ezinụlọ acanthaceae. A na-ewere ala nna ya dị ka ebe ndịda Africa. E nwere ihe dị ka ụdị 200. Aha osisi ahụ bụ nkwanye ùgwù nke onye na-ahụkarị Swedish bụ Karl Peter Thunberg. Ifuru ahụ ka nwere aha ọzọ - "black-eyed suzane". M na-akpọ ya ya n'ihi agba nke etiti ifuru - acha odo odo. Too osisi a ma n'ulo ma n'ogige.
Tunbergia - lianovidnoe ma ọ bụ shrubby osisi. Epupụta bụcha, obi ma ọ bụ ovoid. Enwekwara lobed n'ihu akwụkwọ. Ha ruru 10 cm n'ogologo. Ufodi umu osisi achikota akwukwo. Tunbergia okooko osisi ruru 4 cm ke dayameta ma na-anakọtara na inflorescences. Ọzọkwa, osisi ahụ nwere okooko osisi dị iche iche, site na ọcha na agba aja aja. Ọ na-eto site na July ruo September, na-ewepụ ísì siri ike. N'ebe obibi ya, a na-ele osisi ahụ anya dị ka ihe dị mma, mana na mpaghara anyị ọ bụ kwa afọ ma a na-ejikarị ya maka nhazi ala. Tunbergia nwere mmetụta dị ukwuu n'ụlọ na greenhouses.
Oge ịgha mkpụrụ kacha mma
Esi kwadebe osisi maka akuku
Ala: mejupụtara na fatịlaịza
Otu esi agha osisi
Na-elekọta mkpụrụ osisi
Mkpụrụ nke seedlings nke tunbergia na-emeghe n'ala
Nhọrọ na nkwadebe nke saịtị maka ọdịda
Ogige Tunbergia Nlekọta
Ihe niile gbasara ịgbara mmiri
Ịnakọta na ịchekwa mkpụrụ
Olee otú winbergia winters
Nchikota nke ichota na osisi ndi ozo na ojiji ya n'ime ihe ndi ozo
Otu esi emeso pests na ọrịa
Akuku Tunbergia osisi maka seedlings
Tunbergia bụ osisi unpretentious, ma ọ bụrụ na ị kpebie itolite ya n'ụlọ, ọ ga-adị mkpa ka i mezuo ọnọdụ ole na ole dị mma maka mmepe ọma.
Ị nwere ike ịmalite ịmalite ịmịpụta mkpụrụ nke ụbụrụ ma ọ bụ na njedebe nke oyi (February) ma ọ bụ ná mmalite oge opupu ihe ubi (March).
Ị ma? Ọtụtụ mgbe, a na-eji osisi vaịn na-aṅụ ọgwụ ọjọọ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, na-akwadebe tii na akwukwo ha, nke a na-akpọ ọkwa. Ị nwere ike ịnagide ya, tinyere ọgwụ ndị ọzọ na-emerụ ahụ.
A na-ejikwa mkpụrụ osisi Tunbergia mara germination, n'ihi ya, ha ga-ebu ụzọ tinyekwuo na stimulator na Epin. Nke a ga - enyere ha aka ibili ngwa ngwa.
A ghaghị ime ka ngwakọta ala site na akwukwo ala na ájá na mgbakwunye nke humus. N'agbanyeghị na mkpụrụ osisi ahụ nwere ụfọdụ ihe oriri, ha ka dị mma ka a na-etinye ha na compost na mgbakwunye na ájá na peat. Ọzọkwa, ala kwesịrị ịdị ọcha, ìhè na ngwa ngwa gafere mmiri.
Anyị na-akwado iji seramiiki ma ọ bụ ihe mkpofu nwere ike ịkụ ihe. Ha ga-enwe oghere drainage. Mgbe ị na-aga ịgha mkpụrụ dị na mmiri, kpochapụ ihe ndị ahụ, ma ụbọchị ịgha mkpụrụ nke ụwa kwesịrị ka a ṅụọ mmiri.
Akpa, ị ga-akụ mkpụrụ n'ime ite na peat na omimi nke 1.5 cm ma wụsa ala. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ghaghị ekpuchi akpa ahụ na mpempe akwụkwọ iji mepụta mmetụta griinụ. N'ihi ya, Ome ga-eto ngwa ngwa. Hapụ mkpụrụ n'ime ihe dị otú ahụ maka 2-3 izu. Ọ dị mkpa ịtụle na a ghaghị ịwa ite ndị ahụ iji wepu condensate.
Ọ dị mkpa! Lelee maka ịgbara mmiri, dịka ụfe nke mmiri nwere ike ime ka rotting nke seedlings.
Ozugbo ị hụrụ akpa osisi ahụ, a ga-ewepụ ihe nkiri a. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke na-epulite, ha niile ga-agbapụ.
A ghaghị itinye mkpụrụ osisi na windill, windo nke chere ihu n'ebe ọdịda anyanwụ ma ọ bụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, ma ọ dị mkpa ka ìhè dị iche iche pụta ìhè, dị ka okpueze osisi nwere ike ịkụ ọkụ site na ụzarị ọkụ nke anyanwụ. N'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ ka mma ịrapara na 17 Celsius C. N'oge ọkọchị, ị ga-agba mmiri ahụ ọkụ mgbe niile. Kpebisie ike mgbe ị chọrọ ịkụcha osisi ahụ, ịnwere ike ịchọta ihe n'elu ụwa. Mmiri kwesịrị ịkwado mmiri.
Ọ dị mkpa! Zere mmiri na-asọ oyi na pan.
Na ihu igwe ọkụ, ịkwesiri ịgbakwunye ma na-efesa mmiri distilled na ụlọ okpomọkụ. N'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ ka mma iji belata mmiri. Ọ dị mkpa ka ifatilaiza osisi site na mmiri ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. A ghaghị ime nke a kwa izu atọ, nri fatịlaịza. Mgbe akwukwo abuo puta, Ome kwesiri ichota ma kpoo. Osisi siri ike kwesịrị ịnọgide na tank. Mgbe tubergia seedlings na-eto eto ruo 15 cm, i kwesiri ibute n'elu nke seedlings.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe dị egwu ma dị ike, ọ dị mkpa ka a kụọ seedlings ahụ site na nke mbụ ị na-ewere otu ugboro n'izu na nri ndị nwere nitrogen. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ụba na ogologo oge, anyị na-atụ aro ka ị ghara ịkwaa mmiri.
Mgbe ị gbasịrị mkpụrụ osisi ahụ na mkpụrụ osisi ahụ, site n'oge ahụ oge zuru ezu gafere maka mmepe nke osisi ahụ, a ga-atụgharị ha na mbara ala.
Ị ma? Mkpụrụ ọgwụ ndị nwere organic acids dị na tunbergia kwụsịrị usoro ịka nká, ma mechie mkpụrụ ndụ DNA. Ọ na-enyere aka na nsị nsị, ọgwụgwọ ọrịa shuga na ọrịa ndị ọzọ endocrine.
Tunbergia aghaghị ịdaba na etiti May, mgbe mmiri frosts ikpeazụ gafere. N'oge a, seedlings ga-esi ike ma dị njikere maka ebe ọhụrụ n'ogige. Ọ kachasị mma ịkụ mkpụrụ osisi na-emeghe na mmiri ma ọ bụ n'oge okpomọkụ.
Tunbergia kwesịrị ịbụ ebe na-enweghị drafts na ọkụ ọkụ, n'ebe ọdịda anyanwụ, n'ebe ndịda ma ọ bụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Ala kwesịrị ịbụ ìhè na permeable. Ọ ghaghị inwe oke nri na wayo. Ọzọkwa, ọ ga-adị mma drained, na-anọpụ iche. A ghaghị ịtọghe ala ma jiri aka na-eme ka ọ dị ala.
Ebe dị anya n'agbata akwa kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 20 cm, na n'etiti oghere - 45 cm. E mere nke a ka osisi ahụ wee na-amụba n'obosara. Tupu ịwụda, ịkwesịrị ịwụnye nkwado n'ụdị okporo. Liana ga-eto na ya.
Mgbe ahụ, a na-akụ mkpụrụ nke mgbago tunbury. A ghaghị ime nke a nke ọma ka ọ ghara imebi osisi ndị na-eto eto. Osisi ihe omimi - 1.5 cm.
Mgbe ịgha mkpụrụ dị mkpa iji mee ka mmiri dị na mmiri ma kpuchie ala na mulch. Nke a ga - enyere aka wepu ahịhịa na - ewe iwe. Okooko mbụ ị ga-ahụ 100 ụbọchị mgbe ị na-atụgharị.
Tunbergia bụ osisi unpretentious, ya mere, ọ bụrụ na ihe ọkụkụ na-aga nke ọma ma osisi ahụ agbanye mgbọrọgwụ, i nwere ike ịmalite ilekọta ya.
Ị ma? A na-eme ka mpempe akwụkwọ sitere na tunbergy leaf plates na Malay Peninsula gwọọ nsogbu akpụkpọ anụ: akpụ, nku, ọnya.
Tunbergia hụrụ atọ n'anya, ma ị ga-eso ya. N'oge okooko osisi, ụlọ ụrọ ekwesịghị ikpochapụ, dịka epupụta ga-amalite ịda, ọkpụkpụ ududo nwere ike imebi ifuru ahụ. Ozugbo okooko chafe, a ghaghị belata mmiri. N'oge ọkọchị akọrọ, ọ dị gị mkpa ime ka ọ bụghị naanị ịmị ụzụ, kamakwa ị na-atụgharị na mgbede.
A na-etinye akwa mgbakwasị n'elu na oge nke budding, mana ọ ka mma ịghara ịnụ ọkụ n'obi. Ọnọdụ dị otú ahụ ga-ewetara gị okooko lush. N'oge okooko osisi, ọ dị gị mkpa ịme nri na ịnweta. A na-agbakwunye ha na mmiri mmiri mmiri kwa izu.
Na oge opupu ihe ubi na n'oge okpomọkụ, kwa ọnwa ọ bụla ị chọrọ ịme nri mmiri ịnweta mmiri.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị "overfeed" osisi ahụ, akwụkwọ ga-adọrọ mmasị, okooko ga-adị ụkọ.
A na-emechachaachaa ya na mmalite oge opupu ihe ubi ma ọ bụ na February. I nwekwara ike ime nke a mgbe okooko. Ka osisi wee buru ụdị ohia, ịkwesịrị ịkụnye n'elu.
A ghaghị ịkpụcha ndị na-eto eto, ma ndị okenye ka mma ịghara imetụ aka. Naanị ị ga-ewepu Ome ma ọ bụ oke oke. Ikwesiri igbutu ya na isi na oge nile iziga ntuziaka i choro.
Ekwesiri ka eto eto osisi di oke mkpuru osisi, ma nke a nwere ike belata okooko osisi.
Mgbe okooko osisi na-agafe, igbe mkpụrụ ga-apụta n'ọnọdụ ha. A ghaghị ikpokọta ha ozugbo tupu e mepee ha, n'ihi na osisi nwere ike ịda n'ala. Ọ ka mma ịmepe igbe dị n'elu tebụl kpuchiri akwụkwọ - osisi ga-ada na ya. Mgbe ahụ, ọ dị ha mkpa ka akpọnwụ ma debe ha na igbe igbe. Ndụ ndụ nke osisi bụ afọ 2.
Ọ bụrụ na ị na-eto eto na mpaghara a na-emeghe, ọ ga-ekpofu ya na ọdịda, n'ihi na ọ gaghị adị ndụ n'oge oyi. Ọ bụrụ na ị na-eto eto na ụlọ n'ime ite buru ibu, ịkwesịrị ịkwanye Ome ahụ.
Ọ dị mkpa! Na osisi kwesịrị 5 buds.
A ga-emeso akụkụ ya na ngwọta nke potassium permanganate. Ọ ka mma ịkwaga ite ahụ n'ebe dị jụụ ebe okpomọkụ agaghị adị elu karịa 15 Celsius. Site n'oge ruo n'oge ị ga-ehicha akwa n'elu ala. Osisi ahụ na-anọgide n'ime ụlọ ruo na njedebe nke oge opupu ihe ubi. Mgbe nke ahụ gasịrị, a pụrụ iwepụ ya na mbara ihu ahụ, ma a ghaghị ime nke a nke nta nke nta ka osisi ahụ nwee ọnọdụ dị iche iche. Mgbe nke a gasịrị, ọwara ahụ ga-amalite ọhụrụ buds na Ome, ma ga-amalite oge ntoju tupu oge mbụ.
A na-eji Tunbergia eji ya mara mma. TYa mere, dịka osisi ahụ na-akwa ngwa ngwa, ọwa ahụ ga-achọ mma osisi, ákwà ngebichi, kọlụm ma mepụta nkuku akwụkwọ ndụ na-atọ ụtọ na ibé. N'ebe a, anyị na-atụ aro ka ị gafee ala ma ọ bụ steeti, ka ha na-ele anya n'otu ebe a na-ahụ anya. I nwekwara ike na-eto eto na ite. Akuku ga-agbada.
Ị ma? A maara nke ọma na Thunberg ọbụna karịa puku afọ atọ gara aga. Ndị nchụàjà nke China oge ochie, Malaysia, Thailand na Tibet na-eji ikike ya eme ihe. A na-eji nlezianya pounded leaves nke tunbergia maka ọbara ọgbụgba dị arọ. Ndị dọkịta Thai ji ọgwụ ndị a mee ihe dị ọkụ ma ọ bụ dịka ihe ngwọta megide ịṅụbiga mmanya ókè n'ụzọ ọ bụla.
Tunbergia adịghị emetụta ọrịa, ma n'etiti nje ahụ, ọnyà ududo, aphid, ọnụ ọgụgụ ụmụ ahụhụ na whitefly na-emerụ osisi ahụ.
Ube na-efe efe Ntuzi a na-eri na ntaneti. I nwere ike ịhụ ha. Nkume ntụpọ na eriri ọnya dị mkpa na-apụta na epupụta. Site n'inwe ike na-acha ọcha, a na-ekpuchi osisi ahụ dum na cobwebs. Ná ngwụsị nke epupụta na Ome, ọnyà nke nje ahụ na-agbakọta, nke na-akpali.
Aphid Na oge opupu ihe ubi, aphids na-eto eto na mkpuru elu nke okpueze. Aphids na-eri nri na ohuru elu na-ebibi na-eto eto na epupụta. Ndị ọzọ na-eburu nje ndị na-akpata nsogbu. Ọ bụ ha bụ ndị nwere ike iduga na ọnwụ nke tunbergia. Ị nwere ike ikpochapụ aphids na ọgwụ pyrethrum.
Shchitovka. N'oge mbụ, ọ na-esi ike ịchọpụta ọrịa a. Ọ kachasị mma iji mebie mgbochi n'ọdịnihu. A na-ahụkarị ndị na-eto eto okenye. Ha dị ka tụrụ na epupụta, Kporo na Ome. A na-egosipụtakwa paịl na epupụta (mmiri mmiri dị nro).
Whitefly. Ngwurugwu ndị ahụ dị obere, ma ọ dị mfe ịhụ ha, ka ha na-aga "ìgwè atụrụ" ahụ. Enwere ike ịhụ ụlọ ahụhụ na mpempe akwụkwọ. Ndị na-eto eto na ndị okenye na-eri nri na osisi, ebe ocha na-apụta na saịtị ahụ. Ha nwere ike ibute ọnwụ nke osisi ahụ.
I nwere ike ikpochapụ ihe niile na-eme ka ị ghara ịṅụ ọgwụ ọjọọ "Actellic" na "Fitoverm". Site na ọgwụgwọ ndị mmadụ, anyị na-akwado gị ịsacha osisi vaịn ahụ na ncha ncha, mana nke a ga-eme na ntakịrị ịba ụba pesti.
Ihe gbasara botanical na ọgwụgwọ nke Norwegian Potentilla
Esi tufuo tomato na-adighi adighi
Esi kpochapu ya n'ime ubi
Na-eche maka ifuru ubi gardenia
Omume nwere ike na pests nke violets na ụzọ iji merie ha
Njirimara na-agwọ ọrịa nke Ugbo ọka